I-Zar Casino ekuselula naku-inthanethi isibuyekezo e-Ningizimu Afrika 2020- R15000 Mahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-zar casino
Isibuyekezo se-Zar Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:Kuze kufike ku R15,000
Idiphozithi engadingi ibhonasi
I-Zar Casino iyikhasino ye-inthanethi emnandi enikeza imidlalo esezingeni eliphakeme kubadlali baseNingizimu Afrika kumadeskithophu, kuma-laptops, kuma-smartphone nakuma-tablet. Ikhasino ibukeka kahle futhi inomklamo owenza ukuzulazula kube lula. Kunemidlalo eminingi evela kubahlinzeki besofthiwe yekhompyutha esezingeni eliphakeme abadlali abangayidlala besebenzisa amabhonasi amahle namaphromoshini atholakalayo.
Kukhona nezinye izinto ezenza ukuthi idume kubadlali baseNingizimu Afrika. Ngokwesibonelo, inombolo yocingo yamahhala abangashayela ikhasino kuyo, ukwazi ukwenza izinkokhelo ngezindlela ezaziwa ezindaweni njengamakhadi esikweleti, nokuningi. Zonke izinkokhelo ezenziwa ekhasino zingeRandi laseNingizimu Afrika (i-ZAR).
Imidlalo Yekhasino Emihle Nesofthiwe
I-Zar Casino iyikhasino yamaplatifomu amaningi. Isebenzisa isofthiwe evela kubadayisi besofthiwe yamakhasino e-inthanethi abaningi abaziwayo. Abahlinzeki kule khasino babandakanya, i-Saucify, i-Nucleus Gaming, i-Real Time Gaming, i-Red Tiger Gaming, i-Aristocrat Gaming, i-MultiSlot, i-Genii Gaming ne-iSoftBet.
Kunemidlalo engamakhulu ambalwa ongayizama kule khasino, futhi ungadlala yonke imidlalo mahhala noma ngemali yangempela. Uzodinga i-akhawunti ozodlala ngayo eZar casino, noma ngabe ufuna ukudlala kumodi yokudlala mahhala noma imodi yemali yangempela. Imidlalo yonke iyatholakala ngohlobo lokudlala ngokusheha.
Yonke imidlalo ekhasino iza nezinto ezijabulisayo. Ama-slot aza nama-wild amahle, ukuwina oku-scatter-driven, ama-multiplier, ama-spin amahhala nemidlalo enamabhonasi anethuba lokukunikeza amawini amakhulu kakhulu.
Ukusesha imidlalo kulula, futhi ikhasino inikeza izihlungi eziningi ongazisebenzisa ukusesha futhi ushintshe usesho lwakho. Ungasesha umdlalo ngokuthayipha igama ebhokisini lokusesha. Ngaphandle kwalokho, ungasesha imidlalo ngalezi zici ezilandelayo:
Ungasesha futhi imidlalo ngama-payline 1 kuya ku-12, ama-payline angu-12 kuye kwangu-25, ama-payline angu-25 kuye kwangu-37 no-37 kuya kuma-payline angu-50.
Enye indlela yokusesha, futhi indlela ejwayelekile kunazo zonke, ukusesha ngesigaba somdlalo. Lokhu kubandakanya:
Ama-slot ayiningi lemidlalo e-Zar Casino. Amanye ama-slot ahamba phambili abandakanya imidlalo efana ne-Band Outta Hell, i-Bucksy Malone, i-Mrs. Green’s Plant Emporium, i-Reef Encounter, i-Trick or Treat, i-Rise of Spartans, i-Tomahawk, i-Pina Nevada, i-Double Trouble, i-Siren’s Serenade ne-Freaky Frankenstein.
Kulabo abangawathandi ama-slot, kukhona imidlalo yetafula ekuthakazelisayo etholakalayo. Imidlalo yetafula ibandakanya izinhlobo ezahlukile ze-blackjack njenge-Single Deck Blackjack Vegas Strip Blackjack, ne-European Blackjack. Uthola nemidlalo ye-roulette efana ne-European Roulette ukuzama.
Kukhona imidlalo eminingi ye-poker yevidiyo e-Zar Casino. Imidlalo etholakalayo ibandakanya i-Aces and Faces, i-Deuces Wild, i-Bonus Poker Deluxe, i-Deuces and Joker, i-Triple Bonus Poker, i-Double Double Bonus Poker, i-Joker Poker ne-Jacks or Better.
Kuneminye imidlalo ebandakanya izinhlobo ezahlukile ze-Keno njenge-Captain Keno, i-Power Keno ne-Super Keno ongazizama.
Eminye yemidlalo kule khasino iza nama-jackpot asethiwe, futhi le midlalo ikunikeza ithuba elihle lokuzitholela isizumbulu semali esilingene.
I-Zar Mobile Casino – Dlala Nomaphi, Noma nini Uhamba!
Ukugembula kwamakhasino eselula kukhulu kakhulu eNingizimu Afrika ngenxa yokuvama kwama-smartphone kuleli. Cishe bonke abalandeli bekhasino ye-inthanethi banedivayisi ephathekayo futhi ukufika kwekhasino yeselula kube yinyathelo elikhulu eliya phambili ngoba inika abadlali inkululeko yokudlala imidlalo abayithandayo behamba, kunoma iyiphi indawo noma nini.
Wonke amakhasino e-inthanethi adumile aqondiswe kubadlali baseNingizimu Afrika okungenani anenguqulo elungiselelwe iselula yekhasino yawo yedeskithophu uma ingekho i-app yeselula, ne-Zar Casino ayihlukile. I- Zar Mobile Casino iza nohlelo olubukeka kahle olugaqinisekisi kuphela imidwebo ye-HD ephelele kodwa nekhono lokusiza ama-opharetha afake yonke imininingwane esekhasini kusikrini sedivayisi. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kususa isidingo sokupheqa ngokuya eceleni ukufuna ulwazi olungabonakali kusikrini.
Yonke imidlalo esekhasino yeselula iyatholakala mahhala noma ungayidlala ngemali yangempela ekhasino yeselula. Ikhasino ngokwayo itholakala ngohlobo lokudlala ngokushesha ukuthi asikho isidingo sokuchitha isikhathi kanye nokusebenzise isitoreji sedivayisi yakho ukugcina i-app nakonke okuqukethwe kuyo.
Iphothifoliyo yomdlalo ayinkulu njengalokho okubonayo ekhasino yedeskithophu. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi i-app ayisindwa ngenkathi udla. Yonke imidlalo lapha, kubandakanya ama-slot, ibukeka imihle futhi inezici eziningi.
I-Zar Mobile Casino isebenza kulawa mapulatifomu alandelayo:
I-Zar Mobile Casino Isekela ama-Smartphone nama-Tablet alandelayo:
Android: Ungadlala e-Zar Mobile Casino usebenzisa noma iyiphi yama-smartphone e-Android, uma isebenza nge-i-HTML5. Amadivayisi athandwayo ongawasebenzisa ukufinyelela le khasino abandakanya i-Samsung Galaxy S3, i-Samsung Galaxy S4, namanye amadivayisi e-Samsung Galaxy kuze kufike kuyi-Galaxy S10 yakamuva. Amanye amadivayisi abandakanya amadivayisi e-Google Nexus afana ne-Nexus 5 ne-Nexus 7. Ungase futhi udlale kule khasino ngamathebulethi abandakanya i-Samsung Galaxy Tab 2 7 ne-Galaxy Tab 2 10.1.
IOS: Kunamadivayisi amaningi e-iOS ongawasebenzisa ukudlala e-Zar Casino. Abandakanya:
Ama-iPhone: I-iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6 namanye amadivayisi aze afike ku-iPhone X. I-iPad: Ibandakanya amadivayisi e-iPad 2, iPad 3, iPad 4th, ne-iPad Mini. I-iPod Touch: Futhi ungadlala kule khasino kusukela kuhlobo 5 ye-iPod Touch esebenzisa i-A5 dual core chip.
Windows Phone: Amadivayisi e-Windows Phone ongawasebenzisa ukudlala e-Zar Casino abandakanya ama-smartphone e-Microsoft Lumia abandakanya i-Lumia 550, i-Lumia 650 namanye.
Ukudlala e-Zar Mobile Casino kulula: ungasebenzisa i-akhawunti yakho yekhasino ekhona – uma unayo – ukungena ngemvume nge-smartphone yakho. Noma, ungathayipha i-URL yekhasino kusiphequluli sedivayisi yakho yeselula bese ugcwalisa ifomu ekhasini lasekhaya ukuze uqalise. Ungasebenzisa amaphromoshini ekhasino yedeskithophu ekhasino yeselula. VAKASHELA I-ZAR MOBILE CASINO
I-Zar Casino inikeza usizo lwamakhasimende oluhle lwe-24×7 ngezindlela eziningi. Lezi zindlela zibandakanya:
Ingxoxo ebukhoma: Ungaxoxa bukhoma nelungu lethimba elisiza amakhasimende ngokuchofoza isithonjana se-Ngxoxo Ebukhoma ezansi kwesikrini sakho, ngakwesokudla.
I-imeyili: Ungakhetha uku-i-meyila ithimba elisiza amakhasimende ku [email protected]
Ucingo: abadlali baseNingizimu Afrika banokunethezeka bokushayela ithimba elisiza amakhasimende lekhasino ngenombolo yocingo yamahhala ku: 0800064553.
I-Zar Casino yenza umsebenzi omuhle wokujabulisa abadlali baseNingizimu Afrika ngokubanikeza imidlalo eminingi namaphromoshini athokozisayo kusayithi ebonakalayo ephephile nevikelekile. Into eyodwa, nakuba – ayikho imininingwane mayelana nelayisense etholakala ku-webhusaythi yekhasino.
Iphothifoliyo yomdlalo, ubulula bokudlala namaphromoshini athokozisayo kwenza lokhu kube yikhasino enhle kubadlali baseNingizimu Afrika abangayibheka lapho bezingela ikhasino ye-inthanethi emnandi abazodlala kuyo.
Imidlalo Nokubhenka e-Zar Casino
Izinhlobonhlobo Zemidlalo: Ama-Slot, imidlalo Yetafula – i-blackjack ne-roulette, Imidlalo ye-poker (i-poker yevidiyo kuphela), neminye imidlalo – i-Keno.
Izindlela zokudiphozitha: Instant EFT, EFTpay. Bitcoin, VISA, Mastercard.
Izindlela Zokukhipha Imali: Online bank transfer and Bitcoin.
Isungulwe: 2018 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: 0800064553
Umphathi ngu: All Star Media I-imeyili: [email protected]
Inguqulo Ongayidawuniloda: Cha Usizo lwe-24/7/365 Support: Yebo
ZAR Yokwamukela Onikezwayo
Ayikho Ibhonasi Yediphozithi: R500 Mahhala (Code: 500FM)
Thola ibhonasi yediphozithi enhle kakhulu engu-R500 lapho ubhalisela ukudlala imali yangempela
Imfuneko yokubheja yaleli ibhonasi ingu 50% inani lebhonasi.
Isamba semali esiphumile kule mboni ngu-R500
Le phromoshini ikunikeza amabhonasi anomfutho ngokuya ngamadiphozithi osuwenzile, ngezidingo zokubheja ukuze uthole imali ezithi 45xkungakhathalekile uhlobo lwebhonasi olutholile. Ibhonasi enomfutho ngayinye inikezwa kanye kuphela ngosuku. Lena yindlela ibhonasi enomfutho enikezwa ngayo:
Le phromoshini itholakala kubadlali abane-akhawunti ngoMsombuluko ngamunye. Uthola ibhonasi elinganayo nediphozithi ize ifike ku-R15,000 nama-spin amahhala ku-7 Chakras slot kumadiphozithi akho okuqala angu-3 ngalolo suku:
Idiphozithi Yokuqala: U-50% olinganayo aze afike ku-R5000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARMON01.
Idiphozithi Yesibilit: U-65% olinganayo aze afike ku-R5000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARMON02.
Idiphozithi Yesithathu: U-75% olinganayo aze afike ku-R5000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARMON03.
Uma usuqedile ngamabhonasi alawa madiphozithi angu-3 uthola ama-spin amahhala angu-50 ongawasebenzisa ukudlala i-7 Chakras slot. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha ama-spin amahhala ithi ZARMON04.
Le phromoshini itholakala njalo ngoLwesibili, ngoLwesithathu nangoLwesine futhi ikunikeza isamba esifinyelela ku-R29,000 emabhonasi kulezo zinsuku:
OLwesibili: Uthola isamba semali esingu-R8000 mahhala ngenxa yebhonasi engu-60% olinganayo aze afike ku-R4000 ngediphozithi ngayinye kulawo okuqala angu-2. Ikhodi yekhuphoni ongayisebenzisa ithi ZARTUES.
OLwesithathi: Uthola isamba semali esingu-R6000 mahhala ngenxa yebhonasi engu-75% olinganayo aze afike ku-R000 ngediphozithi ngayinye kulawo okuqala angu-2. Ikhodi yekhuphoni ongayisebenzisa ithi ZARWED.
OLwesine: Uthola isamba semali esingu-R15000 mahhala ngenxa yebhonasi engu-85% olinganayo aze afike ku-R5000 ngediphozithi ngayinye kulawo okuqala angu-3. Ikhodi yekhuphoni ongayisebenzisa ithi ZARTHURS.
Le phromoshini ikunikeza amabhonasi angu-3 amahhala afinyelela ku-R12,000 nama-spin angu-100 spins amahhala njalo ngoLwesihlanu. Inikezwa ngale ndlela:
Idiphozithi Yokuqala: U-85% olinganayo aze afike ku-R4000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARFRI01.
Idiphozithi Yesibili: U-90% olinganayo aze afike ku-R4000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARFRI02.
Idiphozithi Yesithathi: U-95% olinganayo aze afike ku-R4000. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha le bhonasi ithi ZARFRI03.
Uma usuwasebenzisile amabhonasi alinganayo ngokulandelana, uthola ama-spin angu- 100 okudlala i-Pina Nevada. Ikhodi yekhuphoni yokuthatha ama-spin amahhala ithi ZARFRI04.
Le phromoshini itholakala ngempelasonto – ngoMgqibelo nangeSonto – futhi ikunikeza isamba esingu-R25000 wamabhonasi alinganayo nama-spin angu-60 amahhala. Le bhonasi inikezwa kanje:
UMgqibelo: Thola amabhonasi alinganayo ka-85% aze afike ku-R5000 – isamba esifinyelela ku-R10,000 – ngediphozithi ngayinye kulawo okuqala angu-3. Ikhodi yekhuphoni yokuthola le bhonasi ithi ZARSAT01. Uma ususebenzise ibhonasi elinganayo uthola ama-spin angu-60 okudlala i-slot i-Aladdin’s Loot. Ikhodi yekhuphoni yokusebenzisa le bhonasi ithi.
ISonto: Thola amabhonasi alinganayo ka-90% aze afike ku-R5000 – isamba esifinyelela ku-R15,000 – ngediphozithi ngayinye kulawo okuqala angu-3. Ikhodi yekhuphoni yokuthola le bhonasi ithi ZARSUN.
Ungayivula Ngamadivayisi Amaningi: Ikhasino iyafinyeleleka kuma-desktop nakuma-laptop ama-Windows PC kanye nama-Mac kanye nama-smartphone namatablet.
Ihlelwe Kakhle Kusikrini: Ikhasino inesikrini esilula ukufunda esiqinisekisa ukuzulazula okubushelelezi nokudlala okungenannkinga.
Ibhonasi Yokukwamukela Enhle: Abadlali bathola ibhonasi elinganayo yokukwamukela enkulu kakhulu engu-200% efika ku-R15000 nama-spin angu-100 amahhala okudlala i-Big Game slot.